Syria: Politika Maloton’i Banksy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2013 9:58 GMT
Nampidanàka sy nandiso fanantenana ireo Syriana sy mpanara-maso akaiky ny ady an-trano ao Syria ny lahatsarin'i Banksy izay manaraby ny ady an-trano syriana, mitondra ny lohateny hoe “Rebel Rocket Attack,” [Fanafihan'ny mpikomy amin'ny balafomanga].
Mpisera maherin'ny dimy tapitrisa no efa nijery ny lahatsary tao amin'ny Youtube, izay navoaka tamin'ny 6 oktobra, ary nahazo “tiako (j'aime)” maherin'ny 25.000 sy “tsy tiako(dislike) teo amin'ny 5.000 teo izany. Mba hampiroboroboana ny lahatsary, mpanao sariitatra britanika tsy mitonona anarana namoaka sombina horonantsary tao amin'ny Instagram miaraka amin'ity fanamarihana ity :
I'm not posting any pictures today. Not after this shocking footage has emerged. Go to banksy.co.uk for the full video.
Tsy handefa sary mihitsy aho androany. Tsy taorian'iny lahatsary manafintohina niparitaka iny mihitsy. Mandehana ao amin'ny banksy.co.uk raha hijery ny lahatsary manontolo
Nahazo “like (tiako)” maherin'ny 3000 ilay sombina horonantsary ary fanehoan-kevitra teo amin'ny 300 teo izay feno fihetseham-po isan-karazany.
Amin'ity lahatsary tsy matihanina heverina fa avy amin'ny mpioko ity, ny fanombohan'ny lahatsary nalaina tahaka sy natao ihomehezana dia ahitana mpikomy roa miomana handefa balafomanga amin'ny tazoni-tanana mikendry zavatra eny amin'ny lanitra. Ny feo amin'ny lahatsary dia nalaina tamin'ny lahatsarin’ny seranam-piaramanidina Mennegh, izay ravan'ny ady an-trano tao Alep, ao Syria ary nivoaka tamin'ny 23 febroary, araka ny nambaran'i Nader. Misy feo avy any ivelany nihiaka hoe “Miverena, miverena, miverena” afa amin'ny lahatsarim-panadihadiana hafa miteny hoe “Lehibe indrindra Andriamanitra; andia-miaramila miaro ny habakabaky ny filankevitra ara-miaramila ao Alep.” Fotoana fohy taorian'ny tifitifitra, nilatsaka avy eny amin'ny lanitra i Dumbo fahita amin'ny Disney, nipatitaka sy potipotika. Nandihy manodidina sy teo amin'ilay olo-malazan'ny sarimiaina namoy ny ainy ireo mpikomy nisaron-tava, nitafy halwar kameez. Niditra an-tsehatra ny ankizy iray mitafy tahaka ny olon-dehibe, nijery an'i Dumbo ary nandaka ilay mpikomy nihazona ny fandefasana balafomanga. Nandritra ny lahatsary, re miventso ilay Takbir malaza ireo mpikomy, teny filamatra fampiasan'ireo islamista matetika mandritra ny fihetsiketsehana sy vavaka fiderana an'Andriamanitra ataon'ireo Miozolomana mahalala onony, “Allahou Akbar,” midika hoe Lehibe indrindra i Andriamanitra.
Raha nampanontany tena ny maro ny lahatsary mikasika ny dikan'ny “Allahou Akbar”, niteraka tsikera ihany koa ny fijery mirona ankavia ataon'i Banksy. Max Fisher ao amin'ny Washington Post nanoratra momba ny politika manorisory amin'ny sangan'asa :
Mifanohitra amin'ny sangan'asany momba an'i Cisjordanie, tsy mitantara nloatra momba ny ady na ny olana lehibe kokoa ao Syria, na dia avy amin'ny fijerin'ny firehan-kevitra taritokana aza. Tsy miresaka ny fototr'olana ilay izy, fa mijanona ao amin'ireo tranga vitsy fa mahazo aina ny Eoropeana sy ny Arabo ankavia, ka tsy miraharaha izay ambiny rehetra. Tsy midika izany fa ratsy ilay lahatsary na diso amin'ny maha-sangan'asa kanto ara-politika azy, marina izany.
Tahaka izany ihany koa, ilay bilaogera syriana Darthnader nijery ny sanganasa tamin'ny mason'i Edward Saïd, ary nilaza fa samy manevateva na ny sary na ny votoaty. Hoy izy nanontany:
Inona marina no tena hafatra ? Mitovy ny elefanta fadiranovana manidina ve ireo voromby mpiady an'ny fitondrana Syriana? Andiana mpanao hatsikana hafakely ve ireo mpikomy ao Syria izay mivezivezy ka miezaka mamono ireo zavaboary marefo indrindra?
Mpisera Twitter MadeInNablus nizara ny fijeriny:
Sanganehana tanteraka tamin'ilay lahatsary fohy vaovaon'i Banksy momba an'i Syria aho. Mahare fofona tatsinanana aho. .mpikomy izay mihiaka ireo allahu-akbar olon-dia
Misy ireo manontany ny tanjon'ny lahatsary, manatsoa-kevitra fa niresaka lohahevitra “tsy dia fantany tsara izy”, araka ny hevitr'ilay Libaney mpanaraby, Karl Sharro tao amin'ny PRI. Miharihary ny nilazan'i Paul Woodward of War ao amin'ny “Context” fa tsy hita izay tena dikan'ilay horonantsary:
Toy izao tokoa ny doka farany an'i Banksy : doka mitaky hojerena saingy tsy milaza zavatra betsaka afa-tsy ny faniriana manerantany ho voamarika. Hiaka mba hohainoana ataon'ny olona tsy manan-kolazaina izany — fa tsy zava-maranitra amin'ny fanehoan-kevitra politika
Mihevitra ny hafa fa miaraka amin'i Assad i Banksy, ary niampanga azy ho maneso ny fanoherana izay natomboka tamin'ny graffiti momba ny fahalalahana. Rana Kabbani nisioka hoe :
#Mpomba an'i #Assad i #Banksy. Adinony fa ny revolisiona syriana dia natomboka tamin'ny graffiti (soratsoratra amin'ny rindrina) momba ny fahalalahana, izay nanesorana ny hohon'ireo tovolahy.
Nisy ireo nitsipaka ny lahatsary ho sangisangy, ny sasany kosa nanipika fa nahasarika ny saina izany noho ny laza manerantany ananan'i Banksy nandritra ny taona maro. Na dia izany aza, tsy mivaky loha amin'izany ny maro hafa indrindra ireo Syriana, araka ny filazan'i Donatella tao amin'ny Twitter :
Lahatsarin'i Banksy : ankafizin'ireo namako (tsy-syriana) ilay izy ; mbola tsy nisy nahita azy ireo namako syriana ary tsy miraharaha hijery izany akory izy ireo..